FJKM Ampahibato Firaisana: Ilay tranon'ny Mpanjaka nasaina nofenoina
FJKM Ampahibato Firaisana : Dimy minitra Ilay tranon ny mpanjaka nofenoina
Rafitra sy Birao
Ilay tranon'ny Mpanjaka nasaina nofenoina
Indray andro hono dia nisy mpanjaka anankiray izay efa antitra, ka nampiantso ireo zanany telo mirahalahy mba hitarafany izay mendrika handimby azy eo amin'ny fanjakana. Nampanaoviny asa fifaninanana izy ireo: Nasaina hofenoin'izy ireo faran'izay haingana indrindra ny efi-trano iray an'ny mpanjaka, ka izay haingana indrindra mahafeno izay no mendrika.
Ilay lahimatoa no niasa voalohany, nangoniny ny fanaka rehetra tao amin'ny lapa ary namenoany an'ity trano. Niezaka niasa mafy sy haingana izy mba ho voalohany ka tapak'andro no laniny namenoana ny trano dia vitany ny asa.
Ny ampitso dia anjaran'ilay lahiaivo indray. Nampiantso fivoriana tamin'ny vahoaka rehetra teo amin'ny fanjakana izy, ka izay tsy tonga dia hosaziany. Tao amin'ilay trano nasain'ny mpanjaka hofenoina no nampidiriny ireo vahoaka hanatrika ny fivoriana, ka tsy ampy adiny iray dia feno olona koa ny trano.
Ilay faralahy no farany, koa ny harivariva manomboka maizina iny no nosafidiany hanatanterahana ny famenoany ny trano. Naka fanilo izy ary nampirehetiny, ary dia feno hazavana tao anatin'ny indray mipi-maso ilay trano nasaina nofenoina. Izy ary no hitan'ny mpanjaka ho mendrika ary izy no nahavita nameno ny trano tao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
Toy izany koa isika mpianatry ny Tompo, toy ilay fanilo nampirehetina tao anatin'ilay efi-trano ka nanazava ny efitra iray manontolo, dia tokony hijoro hitondra fahazavana eo amin'ny toerana misy antsika ihany koa isika, eo anivon'ny ankohonana, ny fiaraha-monina, any am-pianarana, aty am-piangonana, eo amin'ny firenena, sy izay rehetra alehantsika.
"Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan'i Jehovah, ary aminao no isehoan'ny voninahiny." (Isa. 60: 1-2)